Indawo yokudlela "Manor" e Lublin: ekuhlaziyeni izikhungo
Ukudla kanye iziphuzo, Indawo yokudlela Izibuyekezo
Indawo yokudlela "Manor" e Lublin - yindawo lapho ungakwazi nje bazijabulise nomndeni wakho noma abangani bakho, kodwa futhi ukugubha nanoma celebration noma ahlele umcimbi yenkampani. Yezefundo ibutha ngaphakathi kwezindonga zawo inqwaba izivakashi, kukhona neze kumnandi.
Indawo yokudlela Insimu libanzi. Kuhlanganisa hhayi kuphela Indawo ehlanganiswa egumbini, kodwa futhi Yard endaweni encane eduze isakhiwo. On endaweni embozwe kukhona choice enkulu izindawo uphumule. endaweni yokudlela Siqukethe eliqatjhiweko enkulu, lapho amaqembu okukhulu kakhulu, nokugujwa, amakamelo ezincane ezintathu, kanye ithala, nesebenzela kuphela nezinyanga zasehlobo ezifudumele.
Zonke izimenywa abeza yokudlela "Manor" e Lublin ngenhloso nje nokudlela, bangase bahlale egumbini "Aura". It mncane impela ngobukhulu bayo, ngesikhathi esifanayo uyakwazi ukuze ajabulise ku insimu yalo 30. Le ndawo yokudlela zone kwakheka umbala onsundu ukuthi endaweni ethile buhlanjululwe shades ukuxegiselwa. Izivakashi bangahlala ku lesikhumba armchairs kanye SOFAS konsundu, nge amatafula ambalwa ngokhuni ukukhanya. Lapha Uphahla lwangaphakathi ahlotshiswe umklami ukukhanya Chandeliers, isibani shades okuyinto isici crystal yasekuqaleni. On endaweni ihholo "Aura" kungaba futhi umhlangano ibhizinisi, ukudla kwakusihlwa nomkhaya wakini noma uhlangane nabangani.
Igumbi "lounge" ekahle amadili, eyenzelwe abantu 30-40. Wenziwe ekukhanyeni ukhilimu imibala zibukeke wenabisa indawo emagcekeni. Lapha, yonke indawo kukhona ukukhanya nendwangu elikhanyayo, ephinde ikunike touch obugagu kuya isithombe mazombe seragelo wezangaphakathi. Amathebula kuleli gumbi embozwe eside segolide zokudla kuhlanzekile yini brown nezihlalo izivakashi embozwe nesembozo emhlophe. Ngezinye igumbi "lounge" kufana kakhulu elingaphakathi yayo kwenye ebaleni lokudlala - ihholo "European". It angazamukela abantu 35-40 ngesikhathi.
Futhi ekugcineni, amagama ambalwa mayelana eliqatjhiweko ezinkulu, elisetendeni yokudlela "Manor" (Lublin) okubhekiselwe edilini-ihholo. On endaweni ihholo kungaba kanyekanye ihlanganise idili kuze 250 abantu, okuyinto livumela kakhulu emikhulu izenzakalo. Kulesi ikamelo ifakwe zonke ukukhanya umhlabeleli nemishini ye-sound, okwenza zonke zamaholide yesiteleka nakakhulu. Uphahla lwangaphakathi High kuthiwa sizibeke ezimhlophe amakholomu sikwele. Ukukhanyisa wenziwa usebenzisa isikhala Chandeliers ehlotshisiwe zinhlayiya ezibizayo.
Esikhathini efudumele isizini yokudlela linikeza izivakashi zayo ukuchitha isikhathi on the ithala, okuyinto evulekile kusukela maphakathi no-Ephreli kuya maphakathi no-Okthoba. Kuleli ithala, izivakashi adle bejabulela umoya ohlanzekile fresh futhi umsindo mthombo itholakala yokudlela "Manor" e Lublin. Izibuyekezo kule ithala izivakashi kuvamile ukukhuluma ngezindawo ukuthi umthombo sikhungo - umbono omuhle abaxhasi, njengoba kule sizini hot kakhulu baziswa thunzi ukuthi livela amanzi. On ithala endaweni izivakashi bangase bahlale phansi SOFAS Ababazi bakha e mpofu omnyama. Esikhathini izikhathi ezibandayo izivakashi usuku it unikezwa zokulala.
Esikhathini yokudlela kunendawo encane, egcekeni kahle landscaped ne izindlela itshe, Echibini elithile elincane kanye zasemazweni. Lapha, izivakashi ungakhululeka ngenkathi elinde oda noma ngesikhathi edilini.
Ngo ukubuyekeza yokudlela "Manor" e Lublin zivame ukuliveza labapheki okusezingeni eliphezulu professional, kuboniswe inqubo ukupheka. Indawo yokudlela linikeza izitsha of cuisine European futhi Caucasian.
Lapha eceleni elikhulu idili imenu, bese esimweni okuthunyelwe labapheki athuthukile uhlu ulwazi ka Meatless izitsha.
Kwimenyu enkulu inikeza izivakashi anhlobonhlobo ukukhanya okubandayo ( "Fish Fantasy", "Vegetable Bouquet", "ajapsandali", "Yerevan pepper", imiqulu salmon tartare, ukusikeka ezahlukene) kanye Ungadla esishisayo (suluguni ku ketse utamatisi, izimfanzi ubhiya , umkami, dolma, omelette) salads (Georgian "Caprese", "zemifino" elithi "Khesari," "Manor" "ziphakathi", "ikhaya Marine"), futhi izitsha yokuqala (isobho oluhlaza, minestrone, indlebe nge -Home, kharcho Georgian, Salsola). Njengoba for hot, le "Ipulazi" ikhonza izinhlanzi (Tower of Pike-perch fillet, trout kubhakwa, cod nge umango usoso, umucu ulwandle bass Ligurian) futhi inyama (yenkomo stroganoff, "yenkomo Hamburg" pilaf "Holiday," "Inkukhu Hamburg ", izinhlobo eziningana Steak, khinkali, filet mignon nge hashbraunom) izitsha nge ukunambitheka omuhle.
Yokudlela ukhonza ukudla okumnandi phezu hlupha. Lapha ungakwazi ukunambitha izinhlobo eziningana kebab, skewers inyama ezihlukahlukene (yengulube, iwundlu, inkukhu, inyama yenkomo), ingulube izimbambo, ingulube loin, eyosiwe.
Imenyu futhi inikeza izitsha eziningana Italian. Ikakhulukazi, ungalungisa pasta okumnandi, ravioli, lasagna, risotto, farfalle "Nice" Tagliatelle ne-salmon, konkiloni "Wonke-Italy."
isikhungo Ibha ikhadi enikeziwe ezihlukahlukene ezinhle iwayini nemimoya. Wines lapha amazwe kusuka emhlabeni wonke. Ngokuqondene ngaphezulu oludakayo kanzima, lapha bayakwazi ukunikeza vodka, ugologo, utshwala, whiskey, liqueurs, i-tequila kanye nezinye izinhlobo eziningana.
ethandwa ehlobo iziphuzo ezibandayo, labo abangababiziweyo abandayo ikakhulukazi. Yokudlela "Manor" (Lublin) ukulungiselela okumnandi neziphuzo aqabulayo elithambile, izithelo iziphuzo, fresh. Kukhona Ukukhethwa iziphuzo ezishisayo, itiye ethandwa kakhulu futhi ikhofi.
Kuyi-Internet avame ukubonakala amazwana mayelana yokudlela "Manor", washiya yizivakashi. Uphenyo yokudlela "Manor" ngokuvamile kakhulu. Izivakashi eyakusho emkhathini engokomoya linqoba lapha, ukudla okumnandi okuphekiwe, kanye nomsebenzi omuhle kwabasebenzi. Izivakashi nazo bakhuthazwa lokukhokhelwa esivela kulesi sikhungo.
Ikheli lesikhungo futhi imodi wokusebenza
Indawo yokudlela "Manor" e Lublin etholakala eduze metro station "Lublin", "Bratislava" futhi "Marina" emgwaqeni. Lublin, 84.
Lesakhiwo usuke esekulungele ukuthola izivakashi e ngaphakathi kwezindonga zabo nsuku zonke kusuka emini kuya phakathi kwamabili (ngeSonto uLwesine) futhi kuze 2 am ngoLwezihlanu kanye Saturdays.
The best zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle (semibukiso, eMoscow): ukukala, izici kanye nokubuyekeza
Indawo yokudlela "Vereshchagin" (Vologda, Russia): ukubuyekezwa, izincazelo, amamenyu kanye nokubuyekeza
Indawo yokudlela "Mandarin. Noodle futhi Ducks "(eMoscow): Ulwazi oluyisisekelo, amamenyu kanye nokubuyekeza
Indawo yokudlela "Susanin House", Ivanovo imenyu, ikheli, izithombe
"Golden Grove" (yokudlela): incazelo kanye nokubuyekeza
Teppan-Bar "Peppermint carp", Novosibirsk: ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Umnikelo ekuthuthukiseni anatomy uLeonardo da Vinci. Anatomy kule imidwebo uLeonardo da Vinci
Eugene Litvinkovich - inkanyezi Belarusian ku-Ukrainian show ibhizinisi
Indlela neshaya imali ngokushesha
Scott Fitzgerald: Biography futhi lokusungula
London football club nangezinto abazifezile
Ukufaka i-granite ye-ceramic ngaphandle komswakama: izici zobuchwepheshe nezitayela
Ubani Viktor Tsoi ngobuzwe? Biography Abazali umculi
Ngakho ezahlukene, bezijabulisa futhi flash imidlalo
Time Management - Time Management, noma kanjani ukufunda ukuze sihambisane zonke
Indlela ukulungiselela ocansini. ukulungiselela Esifanele bendunu
Uyini imisho elula? Izimpawu imisho elula eziyinkimbinkimbi